Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpisotro ronono: Hofoanana ny « indemnité d’installation » sy ny volan-jaza?
Mpisotro ronono: Hofoanana ny « indemnité d’installation » sy ny volan-jaza?
Ady hevitra be eo anivon’ny mpiasam-panjakana ny mahakasika ny fanafoanana ny antsoina hoe « indemnité d’installation » na ilay tambin-karama hoentin’ny mpiasam-panjakana handeha hisotro ronono. Tamin’ny taona 1996 dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa homena karama 12 volana tsy misy anesorana amin’ny karama farany noraisiny ny mpiasam-panjakana handeha hisotro ronono. Izany dia mba hitsimbinanana ireny olona ireny izay lany andro tamin’ny fanompoana ny firenena, nefa tsy afaka nanangona na kely mba ho entiny mody. Natao koa izao ho fitsimbinana ara-tsosialy ireny be antitra ireny izay efa manomboka marefo. Aloan’ny fanjakana indray mandeha ihany izany alohan’ny hahazoany ny karama amin’ny fisotroan-dronono izay marihina fa afaka volana maro aty aoriana maro vao horaisiny. Misy aza no afaka roa na telo taona vao mahazo karama fisotroan-dronono. Misy ny loharanom-baovao filazana avy amin’ny mpiasan’ny ministeran’ny Fitantanam-bola sy ny vola fa mety hofoanana manomboka amin’ity taona 2018 ity izany. Voalaza fa isan’ny halefa eny amin’ny Antenimierampirenena ny fandaniana io lalàna io hanan-kery. Efa taona 5 teo ho eo izay no nahenoana ity raharaha ity fa hisy fanapahana. Izany moa dia tao amin’ny fotoana izay naha minisitra ny Vola sy ny teti-bolam-panjakana an’ingahy Hery Rajaonarimampianina ihany koa.
Tsy ny vola “indemnité d’installation” ity ihany no hofoanana hoy ny loharanom-baovao fa hatramin’ny vola 5% isaka ny kilonga iray zanakin’ny olona handeha hisotro ronono dia naman’izao vinavinan’ny hofoanana izao koa.
Maro no tsy faly amin’izany ny mpiasam-panjakana fa indrindra ireo izay handeha hisotro ronono atsy ho atsy. Miteraka resabe eo anivon’ny mpiasam-panjakana ity raharaha ity ka hohitantsika eto ny tohiny.
Marihina fa ity fanjakana nentin’ingahy Hery Rajaonarimampianina ity no nampijaly mpiasam-panjakana be indrindra hatramin’izay. Fa inona loatra no tena tsy itiavan’ity rangahy ity ny mpiasam-panjakana? Izany no fanontaniana mandeha amin’izao fotoana izao.